Maraykanka ayaa sheegay inuu Soomaali badan dalkiisa ka masaafurinayo. - Worldnews.com
Maraykanka ayaa sheegay inuu Soomaali badan dalkiisa ka masaafurinayo.
Maraykanka oo sheegay in uu kaaliyihii Al-Baqdaadi ku dilay Suuriya
Wasaaradda gaashaan dhigga Maraykanka ee Pentagon-ka, ayaa sheegtay in ciidamo Maraykan ahi weerar ay ka fuliyeen dalka Suuriya gudihiisa, ay ku dileen kaaliye aad ugu dhaw...
BBC News 2017-04-22
Ruushka ayaa sheegay inuu u aragto imaashada in ka badan 3,000 oo ciidamo Maraykanka la geeyay qatar ammaankiisa ku timid. Ciidamada ayaa qayb ka ah madaxweyne Barack Obama...
Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, oo ka hadlayey isku soo bax loogu dabaal degayey boqolkii maalmood ee ugu horeeey ee uu xilka hayey, ayaa si kulul u dhaliilay...
Trump ayaa aqbalay in Ruushka uu u dhacay doorashada Maraykanka, ayuu sheegay Reince Priebus
Madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump ayaa aqbalay warbixin ay soo saartay hayadaha sirdoonka in Ruushka uu u dhacay doorashada madaxweynenimada Maraykanka ,...
Siyaasiyiin u sheegay Trump inuu hadalka badan joojiyo
Siyaasiyiin dhowr ah oo hormuud ka ah Xisbiga Jamhuuriga ayaa si caro leh uga hal celiyey hadallada soo noqnoqday ee madaxwyne Donald Trump. Trump ayaa ku celiyay in ay...
Dadaalka Shiinaha ee ah in galangal uu ku yeesho arrima reer Galbeedka ayaa ah mid walaac badan midda Ruushka, waxaa sidaasi sheegay agaasimaha CIA. Mike Pompeo ayaa u...
Dadaalka Shiinaha ee ah in galangal uu ku yeesho arrima reer Galbeedka ayaa ah mid walaac badan midda Ruushka, waxaa sidaasi sheegay agaasimaha CIA. Mike Pompeo ayaa u sheegay BBC in Shiinaha "ay kaga raad iyo galangal badan yihiin Ruushka arrimahani. Waxa uu tusaala u soo qaatay isku daygii ay Shiinaha isku dayeen in ay xadaan macluumaadka ganacsiga iyo in ay galangal ku...
Soomaaliya iyo Bangladesh ayaa la sheegay in ay dad badan u dhinteen xanuuna ka dhashay ...
Wasaqoowga hawada ayaa faro kulul ku haya adduunka, waxaana lagu soo waramayaa in sagaal milyan oo qof ay u dhinteen sababo la xiriira arrintaas. Inta badan dadkan waxa ay ku dhinteen dalalka daqligooda yaryahay ama meel dhexaad yahay, waxaana ugu daran dalalka Bangladesh iyo Soomaaliya. Dalalka Brunei iyo Sweden ayay ugu yartahay dhibaatada iyo dhimashada ka dhalata wasaqowga...
Donald Trump oo la sheegay inuu damacsanyahay inuu Shiinaha booqdo
Xog-hayaha arimaha dibadda Maraykanka, Rex Tillerson, ayaa ku wargeliyey madaxweynaha Shiinaha, Xi Jinping, in madaxweyne Donald Trump damacsanyahay inuu booqasho ku tago dalkiisa si loo xoojiyo isfahamka ka dhexeeya labada dawladood. Tillerson wuxu socdaal ku marayaa dalalka Aasiyada Bari waxaanu hogaamiyaha China kula kulmay magaalada Beijing....
Trump oo ku hanjabay inuu cashuur ku soo rogayo baabuurta Yurub u dhoofiso dalkiisa
Dhacdo kale oo noqon karta mid sii cakirta xiisadda ganacsi ee taagan, ayaa Madaxweyne Trump waxa uu ku hanjabay in uu cashuur boqolkiiba labaatan ah ku soo rogi doono baabuurta Midowga Yurub u dhoofiyaan dalkiisa, hadii ururku cashuuraha uu ku soo rogay badeecadaha Maraykanka ka noqon waayo. Hadalkan oo uu ku qoray barta uu ku leeyahay shababkadda Twitter-ka, aya soo baxay...
Madaxweyne Trump oo sheegay in dalkiisa "la weeraray"
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay tahay "fool xumo" iyo weerar lagu qaaday dalka hawlgalka ay hay'adda FBI-du ka fulisay xafiiska iyo guriga qareenkiisa khaaska ah. "Quraafaadkan joogtada ah ayaa i haysta" ayuu ku yiri saxafiyiinta Aqalka Cad ka soo warrama. Saraakiisha magaalada New York ayaa "gacanta ku dhigay xiriirradii shaqsiga ahaa" ee dhexmaray...